Eyona ndlela ilungileyo yokuPakisha iphepha loMenzi weNkqubo yokuThutha kunye neFektri | IGOJON
Inkqubo yokuhambisa iphepha ekrelekrele ikakhulu inoxanduva lokuhamba kunye nolawulo lwemiqolo yephepha efunekayo kumgca wokuvelisa incence. Ikwahlulahlula ukuba iphepha lokuhambisa iphepha, iphepha lokuhambisa iphepha, kunye nenxalenye yokuhambisa iphepha kunye nenxalenye yokukhutshwa kwephepha. Iqukethe izixhobo zekhompyuter kunye nolawulo lwesoftware, eqonda ngokwenyani ubukrelekrele, ukusebenza ngokukuko, kuluncedo kakhulu ekuphuculeni isantya esipheleleyo somgca wonke, kwaye kunciphisa iindleko zomsebenzi kunye nokuqina.
Inkqubo yeyona iphambili. Umthengi ufuna kuphela ukubanoxanduva lwamalungu afakwe ngaphakathi, imibhobho, unikezelo lomoya, iintambo zonxibelelwano kunye neentambo zombane. Umthengisi unoxanduva lokuyila inkqubo yezothutho epheleleyo kunye nokubonelela ngenkqubo yezixhobo kunye nenkqubo yolawulo, iinkqubo zesoftware, iinkqubo zomoya, iinkqubo zamanzi, inkqubo yokugquma imingxuma yesiseko kunye nokufakwa kwesikhokelo kunye noqeqesho.
Uhlobo lwephepha: incence iphepha roll
Ubukhulu. Ubunzima: 3.5ton
● Iphepha elinoqweqwe lokondla iphepha: iqonga lokugcina iphepha kunye nokwahlula iphepha;
● Isixhobo sokugcina iphepha: siqukethe iisilinda zejack-up, iibhodi zokunamathisela ekhohlo nasekunene kunye neebhokisi;
● Ukuhanjiswa kwetyathanga leBhodi: inesixhobo sokuhambisa sentsimbi esenziwe ngephepha, indlela ejikelezayo kunye nesakhelo (kusetyenziswa isakhiwo senkxaso ejikelezayo);
● Ibhokisi yokuhambisa ikhedini yokuhambisa: ine-v-uhlobo lweetyathanga, indlela yokuhambisa i-sprocket kunye nesakhelo kunye ne-pneumatic kicker yasekhohlo nasekunene; I-v-ezimile kwibhodi ebotshiweyo ine-v-ezimile kwipleyiti kunye nokuqengqeleka okuzalayo, i-v-ezimile kwipleyiti ye-angle yi-degrees ezingama-170, ububanzi ngama-250mm;
● Indawo yokuphuma yokukhutshwa kwephepha: ineeseti ezimbini zokuphakamisa iisilinda, ukukhaba iingalo kunye nezibiyeli;
● Esona sixhobo siphambili sokondla iphepha ngokuzenzekelayo: umgca wemveliso ufakwe phantsi kwesiphathi sephepha, kwaye ubunjwe zizibiyeli zengalo ezomeleleyo kumacala omabini;
Egqithileyo Inkqubo yeModyuli yeBelt yokuhambisa ngokuzenzekelayo
Okulandelayo: Ityathanga leBhodi
Ukugcinwa kwephepha langasese leMega
Isixhobo sokujonga iphepha
Ukuhanjiswa kwePhepha lokuhambisa izithuthi
Ulawulo lweRfid Paper Roll
Inqwelo yokuhambisa, Indawo yokuSebenza yeWorkshop, Ifolda yephepha le-A3, Umatshini oSebenzayo wePakethe yePhepha, Ibhanki ye-Erp, Iinqwelo zokuhambisa iiRoller,